Mba ataovy ato ambanin’ny feko ny tananao; 3 fa hampianianiko amin’i Jehovah, Andriamanitry ny lanitra sy ny tany, ianao, fa tsy haka vady ho an’ny zanako avy amin’ny zanakavavin’ny Kananita izay iraisako monina ianao; 4 fa any amin’ny tanin-drazako sy amin’ny havako no halehanao haka vady ho an’Isaka zanako. Le 12 Mars 25 pages. Indro, efa nomeko sekely volafotsy arivo ny anadahinao; indro, ho fanampena-maso aminao izany, dia amin’izay rehetra momba anao: Tsy hatao hoe Jakoba intsony ny anaranao, fa Isiraely; satria efa nitolona tamin’Andriamanitra sy tamin’ny olona ianao ka nahery. Inona izato manjo anao, ry Hagara?
Izany no nanaovany ny anarany hoe Galeda. Jakoba no anaranao; nefa tsy hatao hoe Jakoba intsony ny anaranao, fa Isiraely ny anaranao; dia nataony hoe Isiraely no anarany. Aoka handry aminao ihany ary izy anio alina noho ny dodaiman’ny zanakao. Indro, Jakoba mpanomponao ao aorianay ao. Fa tsy fantatr’i Jakoba fa Rahely no efa nangalatra azy. Miaingà, ento ny vadinao sy ny zanakao roa vavy izay eto, fandrao mba haringana ianao noho ny heloky ny tanàna.
Tsy nisy vehivavy janga teo. Baiboy hiainga isika, ka handeha hialoha anao aho. Nanonofy aho, koa tsy misy mahalaza ny heviny; ary izaho nahare pvf ianao, hono, raha mandre nofy, dia mahalaza ny heviny. Itondray ombivavy kely efa telo taona Aho sy osivavy efa telo taona sy ondrilahy bwiboly telo taona ary domohina sy zana-boromailala.
Tsia; fa nihomehy mihitsy ianao. Satria efa nihaino ny feon’ny vadinao ianao, ka nihinananao ny hazo, izay nandrarako anao hoe: Andeha isika hanao tanàna sy tilikambo ho antsika, ka ny tampony hahatakatra ny lanitra, dia hanao izay hahazoantsika laza, fandrao hiely eny baibopy tany rehetra isika.
Ahoana no anontanianao ny anarako? Ry anabavinay, tongava alinalina anie ianao, ary aoka ny taranakao hahazo ny vavahadin’izay mankahala azy.
Maroa anaka sy mihabetsaha ary mamenoa ny rano ao amin’ny ranomasina; ary aoka ny vorona hihamaro eny ambonin’ny tany. Izany no nanaovany baibooy anarany hoe Galeda. Trarantitra ianao, aza an’izany; raha mba mahita fitia eto baibolg aho, dia raiso pdc tanako ny zavatra nampanateriko; fa efa nahita ny tavanao aho tahaka ny mahita ny tavan’Andriamanitra, ary efa sitrakao aho.
Bera-lahai-roy; indro, eo anelanelan’i Kadesy sy Bareda izany. Ny taranakao efa nomeko ity tany ity hatrany amin’ny onin’i Egypta ka hatrany amin’ny ony lehibe, dia ny ony Eofrata, 19 dia ny Kenita sy ny Kenizita sy ny Kadmonita 20 ary ny Hetita sy ny Perizita sy ny Refaita 21 ary ny Amorita sy ny Kananita sy ny Girgasita ary ny Jebosita.
Lehibe ny valin’ny heloko mihoatra noho izay zakako. Ka nahoana no nofitahinao aho? Nahata loham-pireneny sy Zera loham-pireneny sy Sama baibolg sy Miza loham-pireneny. Nofiko fa indro, hono, nitsangana teo amoron’i Neily aho; 18 koa, indreo, nisy ombivavy fito matavy sady tsara tarehy niakatra avy teo Baibolj ary nihinana teny amin’ny bararata ireny.
Ny feon’ny ran’ny rahalahinao mitaraina amiko avy amin’ny tany. Ary ny Kananita no tompon-tany tany Kanana fahizay.
Ireo no loham-pirenena tamin’ny Edomita, araka ny fonenany, tany amin’ny taniny avy. Any an-tendrombohitra no hisehoan’i Jehovah. Ny feo baibkly feon’i Jakoba, fa ny tanana dia tànan’i Esao.
Ary ny bakboly fahefatra dia Eofrata. Chapitre 2 1 Dia pfd ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ao aminy. Dia nahatsiaro Farao, koa indro fa haiboly ihany izany.
Tsy miandry ondry any Sekema va ny rahalahinao? Ny faran’ny nofo rehetra efa mby eto anatrehako, satria efa heni-doza ny tany noho ny amin’olona, ka, indro, efa handringana azy mbamin’ny tany Aho.
Donnez pdt avis sur ce fichier PDF Rentrez votre texte. Indro, efa nomeko sekely volafotsy arivo ny anadahinao; indro, ho fanampena-maso aminao izany, dia amin’izay rehetra momba baiholy Aza hihinanareo na tendrenareo izany, fandrao maty ianareo.
baibply Rehefa fito ambin’ny folo taona Josefa, dia niara-niandry ondry tamin’ny rahalahiny izy fa mbola zaza izydia tamin’ny zanak’i Bila sy ny zanak’i Zilpa, vadin’i Jakoba rainy; ary Josefa nitati-bolana tamin-drainy. Tsy te-ho velona aho noho ireny zanakavavin’ny Hetita; raha maka vady amin’ny zanakavavin’ny Hetita Jakoba, tahaka ireto izay avy amin’ny zazavavy tompon-tany koa hataoko inona ny aiko?
Fandrao maty koa tahaka ny rahalahiny izy ; dia nandeha Tamara ka nitoetra tao an-tranon-drainy.
Ny sadika rehetra ho karamanao, dia niteraka sadika ny ondry aman’osy rehetra. Aza midina any Egypta ianao; mitoera eo amin’ny tany izay holazaiko aminao. Modia any amin’ny taninao sy baibolg amin’ny havanao dia hanao soa aminao Aho; 11 tsy mendrika ho nahazo pdff kely akory aza aho tamin’ny famindram-po rehetra sy ny fahamarinana rehetra, izay nataonao tamiko mpanomponao; fa tsy nitondra na inona na inona afa-tsy ny tehiko ihany aho fony nita ity Jordana ity; nefa ankehitriny efa tonga toby roa aho.